Caqabada: Sidee Google u Garan Karaa Marka (Iyo Maxaa Sababa) Inuu Joojiyo Karaawadkaaga Websiteka?
Google naqshadeeye ayaa u muhimsan sida ololaha SEO-ga laftiisa marka la iibiyo bogga internetka. Waxay raadiyaan boggaga internetka iyo mawduucyada tusmooyinka oo dhan bogagga ay ka heli karto. Waxa kale oo ay sameeyaan dib-u-dhajinta bogagga cusbooneysiinta ee goobta. Waxay si joogto ah u sameysaa, iyadoo ku saleysan dhowr arrimood. Waxay ka mid yihiin, laakiin aan ku xaddidneyn, PageRank, caqabadaha xariirka, iyo xiriiriyeyaasha laga helo bogga - bucket hat shop. Tirada wakhtiyada Google xayiray goobta waxay ku xirnaan doontaa hal ama dhowr ka mid ah arrimahan.
Websaydh waa inay si sahlan u socdaan kuwa martida ah iyo sidoo kale xakamaynta Google ee caarada. Waa sababta ay uhesho bogga shabakada saaxiibtinimo in ay tahay faaiido dheeraad ah oo loogu talagalay ololaha SEO-ga. Haddii kale, Google ma awoodi doonto inuu galo mowduucyada, taas oo hoos u dhigaysa darajada bogga on search engine engine liiska ranking.
Ross Barber, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Semt , wuxuu qeexayaa in laba ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee Google in ay ku tiirsan tahay in ay saameyn ku yeeshaan go'aankeeda ama mid gaabis ah ama joojinaysa ku-meel-gaadhkaaga boggaaga waa wakhti isku xiran iyo HTTP lambarka aqoonsiga. Qaar kale waxaa ka mid ah amarka qaska ah, "tag-raac" iyo tags robots.txt.
Xiriirinta waqtiga iyo Xeerasha Aqoonsiga HTTP
Waqtiga xidhiidhsan ee xidhiidhsan wuxuu la xidhiidha xaddiga xilliga Google ee rarista xannibaadda uu qaadayo si uu u gaaro server-yada goobta iyo bogagga shabakadda. Xawaaraha waxaa si weyn loogu qiimeeyaa Google maxaa yeelay waxay si weyn u muujineysaa khibrada user-ga. Haddii websaydhku aanu aheyn xawaarayn-deg-deg ah, goobta ayaa markaa u liidata si liidata. Google naqshadayaasha ayaa isku dayi doona in ay gaaraan websaydhka, iyo haddii waqtiga loo qaaday si uu u abuuro xiriir waa dheer yahay, waxay dib u soo noqdaan oo ay ku uruuriyaan waxoogaa yar. Intaa waxaa dheer, haddii Google uu ku riixo inuu ku soo bandhigo website-ka xawaaraha hadda, ka dibna waxa laga yaabaa inay joojiso waayo-aragnimada isticmaalka waayo waxay si weyn u yareeyn kartaa server-keeda
Qodobka labaad ee tusmada waa Xeerka Xadka HTTP oo tixraacaya sida wanaagsan ee serverku uga jawaabayo codsi lagu raadinayo goobta. Haddii xayeysiinta xaaladdu ay ku jirto gudaha 5xx, markaas Google ayaa isku dayaysa inuu joojiyo ama dib u dhigo qiimaha ay ku uruurinayaan goobta hadda. Wax kasta oo ka mid ah xadka 5xx waa tilmaamaha arimaha suurtagalka ah ee la xiriira server-ka iyo in laga jawaabo codsigaan ayaa noqon kara dhibaato. Sababtoo ah khatarta ah in ay keento dhibaatooyin dheeri ah, koofiyadaha Google waxay tallaabo ka qaadi doonaan oo ay sameyn doonaan taxadar marka serverku uu ka badan yahay.
Goorma Muujinta Google Dib u Dhacday?
Google wuxuu aaminsan yahay in dadka la siinayo waayo-aragnimo ugu wanaagsan, waxaana ay ku-dari doonaan goobo waxtar u leh unugyada SEO-yada ah ee ujeedooyinkaan sareeya. Si kastaba ha noqotee, haddii website-kan hadda soo bandhigi doono dhibaatooyinka kor ku xusan, waxay ku amri doontaa Googlebot inuu isku dayo in uu dib u gurto. Haddii dhibaatadu sii socoto, mulkiiluhu wuxuu lumi doonaa fursad weyn oo ah in Google uu u maro mawduuciisa isla markaana u qoondeeyo darajo wanaagsan oo ku saabsan natiijooyinka raadinta. Marka lagu daro dhibaatooyinkan, calaamad kasta ee spam waxay lahaan doontaa goobta xannibaysa in ay weligeed muuqata natiijooyinka raadinta.
Sida dhammaan qaababka kale ee Google ee isticmaala, caarooyinkeeda sidoo kale waa mid si toos ah. Waxaa loo qaabeeyey si loo helo, loo gurguuro, iyo tusmada moodada oo ku saleysan xuduudaha qaarkood. Haddii goobtu aysan u hoggaansamin hababka ugu fiican, dhejinta ma dhici doonto. Waxaa jira arrimo kale oo badan oo ku lug leh, laakiin had iyo jeer xusuuso inaad si taxaddar leh u fiirsato waqtiga isku xirnaanta iyo xeerarka HTTP ee goobtaada.